Raw Synephrine HCL powder (5985-28-4) hplc =98% | AASraw Fat Loss
/ Products / Fat Kurasikirwa poda / Synephrine HCL upfu
Rating: SKU: 5985-28-4. Category: Fat Kurasikirwa poda
MUTSVENE unobatsira nekugadzira zvigadzirwa kubva ku gram kusvika mukuraira kweSynephrine HCL powder (5985-28-4), pasi peCGMP mutemo uye trackable quality control system.
Synephrine HCL powder iyo inowanzoitika alkaloid chemicals yakagadzirwa yakawana michero uye yakabudiswa kuti ishandiswe sekuwedzera. Zvinoshungurudza maruva ndiyo inonyanya kuzivikanwa yegorosi synephrine uye ine nhoroondo yayo. Kunyange zvazvo ruvara rwezorineni rine ruzivo rwakakura rwezvingashandiswa, synephrine yakashandiswa zvikuru uye yakadzidziswa nemigumisiro yehuremu uye kurasikirwa kwemafuta.
Synephrine HCL powder video
Molecular Kurema: 203.67
Synephrine (CAS 5985-28-4) Kudzokorora
Teerera, iwe unofarira zvekudya zvisina kudya zvinokudzivirira kuti urege kuwana chimiro che hourglass icho wave uchichida kuva nazvo here? Chimwe chezvinhu zvekuita kuti uwane chimiro chakanaka ndechekudzivirira chido chako. Kana ukangoita izvozvo, iwe uchave wakunda hafu yehondo. Kune mishonga yakawanda pamusika iyo yakagadzirirwa kuderedza kudya. Syneprine imwe yemishonga iyoyo. Muizvi Synephrine review, uchawana ruzivo rwakakosha pamusoro pemishonga iyi yakave yakakurumbira kana iri pamusoro pekugadzirisa uremu.
Chii chinonzi Synephrine
Synephrine iyo inokurudzira ine simba ine simba-inopisa uye chido-kudzvinyirira zvinhu. Inobatsirawo muviri wako kutsigira zvakanaka metabolism. Izvi zvinogadzira Synephrine zvakakosha zvikuru kune vanhu vakawandisa uye vanodarika simba vari kuedza kuderedza kudya nekuderedza uremu. Inowanzotengeswa nenzira yeupfu 'munyu' unonzi Synephrine HCL.
Synephrine inowanzowanika mumhando dzakasiyana-siyana dzevirrus. Kunyange zvazvo iripo mumhando dzakanaka uye dzakashata dzemaruva, zvinowedzera mumhando dzakashata. Mune imwe tsvakurudzo inosanganisira zvinopfuura 50 hand-tightened and commercially-prepared prepared citrus fruit juices, synephrine (CAS 5985-28-4) mazinga akawanikwa achibva ku 4-60 mg / L.
Makemikari Properties eSynephrine
DRUG CHEMICAL NAMES ZVINOKOSHA
STRUCTURE MOLECULAR FORMULA
Melting Point 162 kusvika 164 ° C (324 kusvika 327 ° F
Action Mechanism yeSynephrine
P-synephrine inowanzoitika mumitumbi yevanhu, uye inowanzosanganiswa nemakemikari muuropi inozivikanwa seMonoamine oxidase enzymes. Izvo ma enzyme ndeyechetewo izvo zvinodzora mazinga e dopamine, serotonin, uye norepinephrine.
Synephrine inotendwa kuti inokonzera kudarika kwemuviri wemunhu uye kukurudzira kudengenyeka kwemagetsi, iyo inosvika kusvika ku70 muzana yemari yako yezuva nezuva. Maererano nekuongorora, izvi zvinoshandiswa zvinobatsira kukurumidza kushandiswa kwemasabolism, zvichidaro zvichiita kuti urege kurasikirwa uye uremu hwekutakura.
Synephrine isiri yemakemikari yakafanana ne pseudoephedrine uye ephedrine, iyo inoumba yakawanikwa mune zvakasiyana-siyana zvepamusoro-in-counter mishonga yemvura / inotonhorera, simba rinowedzera, uye kuora kurasikirwa kunowedzera. Chinhu chakanaka pamusoro pe synephrine ndechekuti inowedzera zvakanyanya muviri wemetabolism rate pasina kuratidza chero chinokonzera kuwedzerwa kweropa uye kushaya mwoyo. Pamusana peizvi, inowanzoonekwa kuti ndiyo nzira yakanakisisa ye ephedrine.
Synephrine ane nhoroondo yakareba, uye yakashandiswa semushonga wemishonga muEast Africa uye inotyisa kuAsia kwemakore emakore. Yakave yakashandiswa sekurapa kwekudzivirira, kuvhara, kushushikana, uye kuora mwoyo.
Nhasi, Synephrine inowanzoshandiswa pamigumisiro yayo inokurudzira. Iyo inopindirana neuropi emakemikari uye inokurudzira metabolism inobatsira mukudzora kudya, kunyanya kwekhakhenijidhi. Kana uchinge uchitora kuora muviri kuwedzerwa kune synephrine, iwe uchanzwa uchinetseka uye udye zvishoma, saka unogona kuchengetedza utano hwakanaka.
Imwe nzira iyo synephrine inobatsira kurasikirwa kweropa ndeyokuti inokurudzira thermogenesis uye inopisa muviri wako kuti upise mafuta asingadiwi. Kunze kwekufambisa kupisa mafuta akawanda, kuwedzera kunodzivirirawo kuchengetedzazve muviri. Nokudya zvizere zvinowanikwa zvine chigadzirwa chechisikigo nguva dzose, iwe uchakwanisa kurasikirwa nemafuta nokukurumidza.
Zvidzidzo zvakagadzira kubatana pakati pekuneta nekuderera. Mukuwedzera pakubatsira vanhu vakawandisa uye vane uremu hwepamusoro vanorema kuwanda, synephrine inowanikwa kuva mafungiro ekuwedzera. Izvi zvinoita kuti iwedzere kubatsiri kune avo vane dambudziko, kuora mwoyo, kana chero humwe dambudziko rinoremesa uremu.
Synephrine (CAS 5985-28-4) Dosage
Kune vanhu vakawanda, mizani ye 10-20 milligrams inotorwa katatu pazuva inokurudzirwa. Kunyange zvakadaro, muyero we50 milligrams (kunyange kwete katatu pazuva) inogona kukurudzirwa kune vamwe vanhu.
Mune kumwe kuongorora, imwe chete dhizaundi yemakumi mashanu emamirigiramu esynephrine yakawanikwa ichisimudzira basal metabolic rate ne50 macalorie. Usati washandisa synephrine, zviri nani kubvunza chiremba wako pane iyo muyero iyo inokushandira iwe.
Kungofanana nehuwandu hwakawanda, hauzooni zvakawanda paunotanga kushandisa synephrine. Zvibereko zvakanakisisa zvinogona kuonekwa chete mushure mokunge uchishandiswa. Vanhu vazhinji vanorondedzera kuwedzera kuduku kwesimba pasina mimwe yemigumisiro yakawanda inowanzobatanidzwa nekukurudzira, zvakadai sekukurumidza kwemoyo, kushungurudza, jitters, nezvimwewo.
Kuchengetedza Paunotora Synephrine
Usatora zvinopfuura chirevo chezuva nezuva chakakurudzirwa: Mukukurumidza kuwana mitezo yakakurumidza, unogona kuedzwa kuti udye synephrine yakawanda kupfuura iyo inorayirwa dose. Kushandisa zvakanyanya synephrine kupfuura zvakatemwa kunowedzera njodzi yemigumisiro yakadai sepfungwa uye chirwere.
Usabatanidza synephrine nezvimwe zvinokurudzira: Synephrine isimba rinokurudzira zvikuru, saka kuibatanidza naro nezvimwe zvinokurudzira kunogona kukonzera mimwe migumisiro yakakomba. Kushandisa pamwe chete nezvimwe zvikamu zvakadai sePAA kana ephedrine kunogona kukonzera njodzi dzehutano dzakadai sekupera, kusungwa kwemwoyo, uye kuwedzerwa kweropa.
Usatora synephrine kana iwe uine chirwere chepachirwere chemuviri: Kana uri kutambura nehuwandu hwehutachiona hweHIV / AID kana zvimwe zvirwere zvakakomba, zvakanaka kuti usatora synephrine. Izvi ndezvokuti kuwedzera kunogona kuwirirana uye / kana kusangana nemishonga yaunenge uri kutora kurapa / kudzora mamiriro ako.
Nemhaka yezvingava nemigumisiro inokonzerwa nekubatana kwe synephrine (5985-28-4) nemamwe makemikari, zvakanakisisa kutenga nzira yakachena yeSynephrine inowanika. Dzivisa vatengesi vanoshandisa fillers kana kusanganisa synephrine nemakanda akafanana ephedrine kana caffeine.
Zvaunofanira Kuita Kana Iwe Ukadarika paSynephrine
Kana iwe ukatora mamwe synephrine kupfuura inorayirwa zuva rega rega, iwe unogona kuona mamwe madhigirii emigumisiro yakadai sekutsvaira kwemwoyo, kurwisa, musoro, chizungu, etc. Kana ukanyanyisa kurwisa synephrine, zvakakosha kutsvaga kurapwa kwekukurumidza panguva imwechete . Zvimwe, unogona kudana Poison Help Line pa 1-800-222-1222.
Synephrine HCL powder Mhedziso
Sezvo zvinotarisirwa kubva kune ipi zvayo inokurudzira ine simba inowedzera mastabolism, chinhu chikuru chinobatsira synephrine supplementation kukurumidza kuora kurasikirwa. Yakabatana nekudya kwakakodzera uye nguva dzose yekuita muviri, synephrine inogona kukubatsira kuwana muviri wakakwana uye kudzivisa matambudziko anokonzerwa nekurema, zvakadai sokukwirira kweropa, zvinetso zvemwoyo, nezvimwewo.